तिहारको रमझममा सचेत बनौं
नेपालीहरुको दोस्रो महान चाड तिहार ढोकैमा छ। उज्यालोको रुपमा चिनिने यो पर्वले नेपालीहरुको मन उमंगित पार्दछ। दिदीबहिनीहरु दाजुभाइलाई टीका लगाउन जान्छन्। दाजुभाइले आफ्ना दिदीबहिनीलाई उनीहरुको हैसियत अनुसार उपहार दिने गर्दछन्।
'फुल जस्तै जीवन जीउन पहिले काँडाहरूसँग मित्रता गाँस्न सिक्नुपर्छ'
आजैको सुर्यास्तसँगै मेरो जीवनको आखिरी दिन सकिने छ । आज तपाईंलाई यस्तो यकिन भयो भने के तपाईं आजका लागि छुट्याएको योजनाहरू पुरा गर्न लाग्नु होला या त्यसमा सम्पादन गरेर नयाँंपन दिनु हुनेछ ! आजै त्यस्तो दिन आएको हो भने जीवनमा नगरी नहुने काम तर्फ लाग्नु हुन्थ्यो होला । छोराछोरी, बा–आमा वा नजिककालाई नभनि नहुने कुरा भन्नका लागि तुरुन्त प्रस्थान गर्नु हुन्थ्यो होला ।
असली सुन्दरता छालामा होइन, मनको गहिराईमा !
‘सफलता दुई पटक प्राप्त हुन्छ, पहिला हृदयको अठोटमा र दोस्रो वास्तविक संसारमा ।’
‘अग्निपरिक्षामा रामकुमारी झाँक्री’
नेपालको राजनैतिक आन्दोलन त्यसमा पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा शसक्त रुपमा उदाएको पात्र हुन्, माननीय सहकारी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री । विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएकी झाँक्री नेपालको राजनीतिमा खरो, हठी वक्ताका रुपमा चिरपरिचित छिन् ।
सार्वजनिक यातायातमा कोचाकोच यात्रु
दशैं मान्न घर गएका मानिसहरु दशैं मानेर उपत्यका फर्किने क्रम बढिरहेको छ । केहीदिन अघि सुनसान रहेको काठमाडौँ पुन पनि चल्मलाउन थालिसकेको छ । उपत्यकाभित्रिने नाकाहरुमा सार्वजनिक यातायात र निजी प्लेटका गाडीमा सवार भएर मान्छेहरु उपत्यका भित्रिरहेको छन् ।
आयुर्वेदिक औषधिमा भगवान भरोसा !
चर्चित हास्य टेलिसिरियल ‘सक्किगोनी’ को यही असोज महिनाको पहिलो साता प्रशारित भाग ३५ मा एउटा आयुर्वेदसँग सम्बन्धित सामग्री देखाइएको छ । सिरियलका एक पात्र ‘पाँडे’ ले काठमाडौँमा ‘पाँडे आयुर्वेदिक फर्मा’ खोल्छन् । जहाँ गाउँबाट बाख्राको बड्कौला र फर्निचर उद्योगबाट काठको धुलो झिकाइन्छ, प्याकेजिङ गरेर बेचेको देखाइन्छ ।
हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थको एजेण्डा बोकेको कमल थापाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कायम गरेको वर्तमान नेपालको संबिधानलाई ‘उत्कृष्ट’ संबिधान भन्यो भन्ने आरोप मलाई अक्सर लाग्ने गरेको छ । वास्तविकता त्यो होईन । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संबिधानबारे बोल्दा कहिल्यै पनि मैले ‘उत्कृष्ट’ शब्द प्रयोग गरेको छैन । बिश्वको कुनैपनि संबिधान शतप्रतिशत पूर्ण र उत्कृष्ट हॅुदैन भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ ।
अस्पतालको लापरबाहीले कसैले अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस्
बिरामी भएर कसैलाई पनि अस्पताल जान मन लाग्दैन् । अन्य मुलुकमा बिरामी नभए पनि महिनै पिच्छे हेल्थ चेकअपको लागि जालान् तर, नेपालमा त्यस्तो अवस्था प्रायः छैन । कारण कोही गरिबीको चपेटामा छन् भने कसैलाई ब्यस्तताले सताएको छ । अर्को मृख्य कारणचाँही सरकारी अस्पतालको सेवासुविधाको प्रभाव र निजी अस्पतालको मँहगो शुल्क । जुन कल्पना बाहिरकै विषय भयो ।
एनआरएनः चुनौतीका तीन चुचुरा
नेपालमा दशैं र विदेशमा अक्टोबर महिना नजिकिएसँगै दुवैतर्फ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का गतिविधि बढ्न थाल्छन् । अझ बढी त प्रत्येक दुई वर्षमा आउने दशैं वा अक्टोबरमा । किनभने प्रत्येक दुई वर्षमा एनआरएनको नेतृत्व परिवर्तन जो हुन्छ ।
चाडपर्व आउँदै, निषेधाज्ञा हटाउँदै, कोरोना फैलाउँदै
साउन महिना लागेसँगै चाडपर्वहरुको ओइरो लागेको छ । कहिले साउने व्रत त कहिले गाईजात्रा । जुन चाड आएपनि यस्तो कोरोना कहरबीच भीडभाड भन्दा अरु केही छैन् । गाईजात्रा मनाउने क्रममा भक्तपुर दरबार स्क्वायर वरिपरि कत्रो भीड देखियो । कोरोनाको जोखिम बढेकोले भक्तपुरको प्रजिअले भीड नगरी मनाउन आग्रह गर्यो । तर, प्रजिअकै कमीकमजोरीको कारणले गर्दा हजारौं सर्वसाधारण स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरि गाईजात्रा मनाउनको लागि जम्मा भए ।